काल्पनिक – मझेरी डट कम
त्यसो त मलाई लेखक भनेर पूरा स्वीकार गर्न पनि कति जना मात्र चाहादैनन् । भन्छन् चारखालको नौसिन्दा पनि त लेखक हो भनेर किन नमान्नु ? यसको जवाफ के दिने ? बोल्नेले पनि यस्तो खरो कुरा मातेपछि नै गरेको हुन्छ । त्यसमा मैले मातेर दिने जवाफको फेरि के अर्थ ?
मेरो एउटै भनाइ छ – पैसाका लागि लेख्छु भने, राम्रो पैसा पाए पैसैका लागि लेख्न छोड्न पनि सक्छु । यसमा के छ र ?
अहिले त मलाई आˆनो लेखकीय व्यक्तित्व धान्नसमेत लगभग सारा पत्रपत्रिका आउनुपर्नेछ, आएकै छु । जोसुकैले जेसुकै भनोस् । लेखक नमाने नमानोस्, पत्रिकाले छापुन्जेल दिनु पर्दछ । जुनमा पनि दिन्छु । प्रतिभा-प्रतिभा छाडौा । मागेर दिएन भने पछि पर्ने ठूलो डर छ मलाई । अरू केही नभए पनि, म प्रत्येक पत्रिकामा प्रकट हुने लेखकका रूपमा त चर्चितै छु । यो पनि त उपलब्धि नै हो ।
अब केवल एउटा पात्र जोगिएको छ जुन मैले लेखेको छैन । नलेख्ने कारण पनि छ । सो पात्र नितान्त काल्पनिक हो तापनि त्यसका केही कुराहरू जोरजार पारेर खोजेको छु । यो एउटा फ्याङल्याङे पात्र हो, होइन ? खाते होइन तर निम्नमध्यम वर्गीय अव्यवस्थित । खाते केलाई भन्छन् ? तर भन्नलाई भनिदिउा, यो पात्र एउटा निम्न मध्यमवर्गीय खाते हो । दुई प्रकारको मोजा लगाउनु यसका लागि मामुली कुरा हो । यसको घडीले दिनको दुईपटक सही समय दिन्छ । दुई बजेर पच्चीस मिनेटमा । यसकारण कि घडी दुई बजेर ठ्याक्क पच्चीस मिनेटमा कैयौँ दिनदेखि रोक्किएर बसेको छ । दिउासोको समय त यो पात्र हेर्न भ्याउाछ । प्रसन्न पनि हुन्छ, अहिले त दियो नि ठीक समय तर राति दुई बजेर पच्चीस मिनेटको सही समय ऊ हेर्न भ्याउादैन । त्यसबखत ऊ मदिरा सेवन गरेर मस्त निदाएको हुन्छ । यसरी आˆनो घडीले दिने सही समयको ऊ पचास प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न भ्याउाछ । पक्कै घडीको ब्याट्री सकियो । फेर्न पैसा लाग्छ । त्यसकारण फेर्दैन । घडी दिनदिनै भिर्छ । संजोगले कसैले ऊसित समय सोधेको छैन । एकपटकबाहेक । एकपटक एउटी तन्वङ्गी केटीले अनुहारमा हतारको तीव्र भावसहित सोधी- “कति बज्यो दाइ ?”
उसले साँच्चिकै घडी हेर्‍यो । अनि साँच्चिकै आˆनो घडीमा जुन समय सदाकालदेखि बजिरहेको थियो, त्यही बताइदियो । यस्तो नहुादो हो अन्य परिस्थितिमा । केटी अत्यन्त रुपवती थिई । त्यसको रुपबाट प्रभावित मेरो त्यो पात्र निकै हदसम्म आत्तिएको हुादा उसले त्यहाँ सत्य बोल्दा सत्य, असत्य बोल्दा असत्य हुन्छ भन्ने तथ्य ठ्याम्मै बिस्र्यो । केटी मिलनसार थिई । हाँसी । हाँस्दै भनी- “मैले त १२ बज्यो कि बजेन भनेर जान्नलाई सोधेकी थिएा ।” त्यसपछि त्यहाँ अडिइन त्यो केटी ।
घडीपछि उसको जीवनमा जुत्ताको पालो आउाथ्यो । अहिले जुन जुत्ता ऊ लाएर हिाडिरहेको थियो, त्यो कोही अरूको थियो । प्रायः गरेर रक्सी खाएर निस्किादा कुनै अरूकै जुत्तामा खुट्टा छिराएर हिाडिदिन्थ्यो । प्रायः त्यस्तो भएकाले उसको बानी नै भन्ठानुा । पछि जुत्तावालले कसैगरी पत्ता लगाएर उसबाट आˆनो जुत्ता प्राप्त गर्दथ्यो, खुसी हुादो हो । उसका जुत्ताहरूको तुलनामा तीमध्ये कुनैका पनि जुत्ता उम्दा केटिका हुन्थे । यसपटक गोलमालमा पनि गोलमाल भयो । पन्ध्र दिनभित्रमा तीन जोर जुत्ता फेरिदिएछु अर्काकै । अब असल र खराब पनि ती तीन जोर जुत्ताका बीचमा पो गर्न थाल्यो । यद्यपि तीनै जोर अर्काको थिए । तैपनि उसलाई अपसोच केमा लाग्यो भने दोस्रो जुत्ता राम्रो थियो, त्यो फेरेर तेस्रो जोर लगाउन पुगेकोमा उसलाई थकथक थियो । उसको आˆनो जुत्ता त कहाँ होला कहाँ होला ? आजसम्म दावी विरोध आएको छैन । अब त यही जुत्ता पनि फाट्ने बेला भइसक्यो । उसको सोचाइ हो । अब त उसको आˆनै जुत्ता यीभन्दा साबुत देखिने बेला आइसक्यो ।
मित्रले भन्यो- “तिमी पनि गर आज ।”
एक दिन पात्र आइरहेको थियो । पछिल्तिरबाट आवाज आयो सर । उसले देख्यो छिमेकी रहेछ । त्यसले आएर भन्यो- “सर अब त्यो खाल्डो पुर्न भनेर निकासा आउनै आाटेको छ ।”
उसले भन्यो- “ए ।”
त्यस्तो चीसो ‘ए’ किन भन्यो भने आज ४-५ वर्षदेखि त्यो खाल्डोका लागि उसले कति पटक यसलाई भनिसकेको थियो । यो समाजसेवी भन्थ्यो आफूलाई । कहिल्यै पुरिएन । यता आएर भन्न छोडेको थियो । उसलाई यही खाल्डोले कतै न कतै विजयी बनाइदिइरहेको थियो । यो विजय खोसिने उपाय गरेर ऊ रातप्रति रात पराजित बन्न चाहादैन थियो ।